စော၊ ဦး (ဂဠုန်) - ဝီကီပီးဒီးယား
မွေးနေ့ မတ်လ ၁၆ ၊၁၉၀၀ ခုနှစ်
ကွယ်လွန် မေလ ၈ ၊၁၉၄၈ ခုနှစ်
မွေးဖွားရာဒေသ ကိုင်းကြီးရွာ၊ အုတ်ဖိုမြို့
လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့သော အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်
တည်ထောင်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း ဂဠုန်
↑ Martin Smith (1991). Burma - Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books, 91, 73–74, 77, 92, 65, 69။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စော၊_ဦး_(ဂဠုန်)&oldid=529933" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။